IKit yeMedia kunye neSikhokelo sophawu- BullyingCanada
ufuna inkxaso yakho Uluntu oluphilisayo Ukukhanyisa kule Ngxaki Unako Ukunceda Ukubhengeza imiba engqonge ukuxhatshazwa kolutsha
unceda abantwana ukuba bafune uncedo kwaye ubafumane endleleni eya empilweni.
BullyingCanada uyayixabisa imibuzo evela kwiintatheli malunga nomsebenzi.
ukunika ulutsha oluxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo
BullyingCanada iye yaxhasa ulutsha kangangeminyaka engaphezu kweshumi elinesihlanu kulo lonke ilizwe—inceda amaxhoba okungcungcuthekiswa ukuba afumane indlela yokuchacha esebenzayo kubo.
BullyingCanada ibonelela ngoluhlu lweenkonzo, kwaye ibonelela ngezo nkonzo ngokusekelwe kwiimfuno zomntu ngamnye. Wonke umntu uphathwa njengomntu ozimeleyo kunokuba nje ifayile yetyala. I-ethos ingena kuyo yonke into BullyingCanada yenza: ukunika ulutsha oluxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo. Ingaphezulu komgca wethegi, sisizathu BullyingCanada ikhona.
wonke umzuzu Ubala
Okukhona umntwana engcungcuthekiswa ixesha elide, kokukhona efumana amanxeba emzimbeni, ngokweemvakalelo nangokwengqondo anokuhlala ubomi bakhe bonke. Ukungcungcuthekiswa kunokubangela intlungu, kubashiya abantwana bengakhululekanga, beneentloni yaye bengakhuselekanga.
Abantwana bahlala beqaqanjelwa sisisu, iintloko ezibuhlungu, ukuphakuzela, namaphupha amabi. Basenokungakwazi ukulala—okanye balale kakhulu. Bahlala beqhuba kakubi esikolweni ngenxa yokulahlekelwa kukugxila kunye nokuzithemba okanye ukuhamba ngendlela engafanelekanga njengoko bezama ukubaleka abaxhaphazi. Xa ukuxhatshazwa kungayekeleli, kunokukhokelela abantwana ekubeni bazibulale. Ukungcungcuthekiswa nako kuyabenzakalisa abo babukeleyo, abasenokuba boyikela ukuba nabo baza kuxhatshazwa.
Abaxhaphazi abafunda ukuba bangakwazi ukuxhathisa ubundlongo-ndlongo nogonyamelo maxa wambi baye baqhubele phambili le hambo de babe badala, yaye kusenokwenzeka ukuba banokuba ngabaxhaphazi ngokwesini kungenjalo babandakanyeke kulwaphulo-mthetho.
Le yinxalenye yokuba kutheni BullyingCanada ifuneka ngamandla ukunceda abantwana abaxhatshazwayo, ngokukhawuleza emva kokuba ukuxhatshazwa kuqalile
I-OPP ithi i-cyberbullying iyakhula kwizikolo zaseKenora
Ukuxhatshazwa kwi-cyberbullying phakathi kwabafundi kuyanda e-Kenora ngokutsho kwePolisa lePhondo lase-Ontario. Inkcazo ukuba BullyingCanada inika ubundlavini be-intanethi isebenzisa i
Ithetha ukuthini ukuBhiyozela uSuku lweShirt ePinki
Uninzi lwabantu baseCanada bacinga ngeHalifax, eNova Scotia, njengendawo entle yokuhlala, kunye nokutyelela, kodwa iphondo laselwandle likwalapho uSuku lweShirt ePinki-lwaziwa.
Inyaniso: Ngaphezu kwesiqingatha sabafundi abachatshazelwa kukuxhatshazwa bakholelwa ukuba abaxhaphazi babo babenamandla okuchaphazela oko abanye abafundi babecinga ngabo. Abafundi
Uhambo olupheleleyo lwesangqa: Ukwazisa Cloudflare Canada - Intelligent CIO North America
UMichelle Zatlyn, u-Co-founder, uMongameli kunye ne-COO e-Cloudflare, uchaza indlela inkampani eyandisa ngayo imisebenzi yayo yaseCanada, indlela inkampani esebenza ngayo kunye namashishini aseCanada kunye.
Uhambo lugqityiwe : inkcazo yeCloudflare Canada
Aujourd'hui, Cloudflare i annoncé que Toronto accueillera le premier bureau kunye ne-première equipe de Cloudflare okanye Canada.
UHAMBO OLUPHELELEYO LWESAQA: Ukwazisa i-Cloudflare Canada
Namhlanje i-Cloudflare ibhengeze ukuba iToronto iya kuba likhaya le-Cloudflare yeofisi yokuqala yaseCanada kunye neqela. Ngelixa ngoku ndihlala eSan Francisco, ndazalwa
Imibuzo? Ngaba ufuna uhlobo olwahlukileyo lwefayile okanye umahluko? Qhagamshelana neOfisi yoNxibelelwano nge-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
Faka isicelo soGunyaziso lokuSebenzisa BullyingCanada ILogo okanye iiMpawu zoRhwebo
BullyingCanada IMaple Leaf Mark
Khuphela iFayile yeZip (.pdf, .png, .svg)
Khuphela iFayile yeZip (Greyscale; Mnyama; Mhlophe) (.pdf, .png, .svg)
BullyingCanada Akukho mlinganiselo
Pheleleyo BullyingCanada Akukho mlinganiselo
Khuphela iFayile yeZip yesiFrentshi (.pdf, .png, .svg)
Khuphela iFayile yeZip yesiFrentshi (Greyscale; Mnyama; Mhlophe) (.pdf, .png, .svg)
BullyingCanada ILogo ngaphandle kweTagline
BullyingCanada Phawula ngokubhaliweyo
Khuphela iFayile yefonti
I-Canada Post ivunyiwe